BBC Somali - Warar - Xasan Shiikh ayaa la doortay
Xasan Shiikh ayaa la doortay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 10 September, 2012, 09:33 GMT 12:33 SGA
Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in tartankii doorashada Madaxweynaha Soomaaliya uu ku guuleesytay Xasan Shiikh Maxamuud.
Wareeggii koowaad ayaa lagu kala bixi waayay. Waxaa loo gudbayaa wareegga labaad oo ay tartami doonaan laba murrashax oo kala ah, Shariif Shiikh Xasan iyo Xasan Shiikh Maxamuud. Cabdi wali Gaas iyo Cabdulqaadir Cosoble oo usoo baxay wareegga labaad ayaa ka baxay tartanka.
Guddiga Doorashada ayaa ku dhawaaqay codadka la kala helay. Wareegga labaad waxaa u soo gudbay Shariif Shiikh Xasan, Cabdulqaadir Cosoble Cali, Xasan Shiikh Maxamuud iyo Cabdiwali Maxamed Cali. Laakiin waxaa ka tannaasulay intii aan la gelin wareegga labaad oo ka baxay tartanka Cabdiwali Maxamed Cali oo heystay 30 Cod iyo Cabdulqaadir Cosoble Cali oo heystay 27 Cod
Wareegga u dambeeya waxaa u tartamaya hadda labada musharrax ee kala ah:
Xasan Shiikh Maxamuud oo heystay 60 Cod.
Daawo Halkan si toos ah uga daawo
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu dooranaya Madaxweyne cusub oo hoggaamin doona Soomaaliya afarta sano ee soo socota.